Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Djibouti » Mampiseho ny fizahan-tany Djibouti ao amin'ny World Travel Market London: voalohany
Ny firenena kelin'i Djibouti dia voatonona ho firenena iray tsy dia be mpitsidika indrindra eran'izao tontolo izao - saingy izao dia te-hanova izany toe-javatra izany amin'ny fampiratiana ao amin'ny WTM London - ireo hetsika nahatongavan'ireo Hevitra.
Ilay firenena kelin'i Djibouti dia nantsoina hoe iray amin'ireo firenena tsy dia be mpitsidika indrindra eto an-tany - saingy ankehitriny te hanova izany sata izany izy amin'ny alàlan'ny fampirantiana ao amin'ny WTM London - ireo hetsika ahatongavan'ny Hevitra.
Tamin'ny taon-dasa dia nankalaza ny faha-40 taonan'ny fahaleovany tena izy avy any France, ary mikasa ny hampivelatra ny indostrian'ny fizahantany ho iray amin'ny sehatry ny fitomboany.
Tombanana fa ny firenena, sisin-tanin'i Eritrea, Ethiopia ary Somalia, tsy mahasarika olona 73,000 fotsiny isan-taona no mahasarika azy - saingy misy toetr'andro, tontolo, tantara ary morontsiraka izay mahasarika ireo mpandeha manerantany.
Na izany aza, ny toerana misy azy dia midika ihany koa fa manana toby miaramila maro, ary ny Biraon'ny raharaham-bahiny britanika manoro hevitra ny amin'ny fitsangatsanganana rehetra mankany amin'ny sisintany miaraka amin'i Eritrea.
Ny milomano miaraka amin'ny antsantsa trozona dia iray amin'ireo fisongadinan'ny mpizahatany, raha ny hetsika hafa kosa dia ny fitsorohana an-dranomasina, ny jono, ny fitsangantsanganana ary ny fijerena vorona. Izy io koa dia mirehareha amin'ny velaran-tany ara-jeografika mahatalanjona misy tendrombohitra, volkano, farihy masira ary efitra.
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena izay manompo an'i Djibouti dia misy Air France, Turkish Airlines ary Kenya Airways, raha ny tanànan'ny tanànan'i Djibouti renivohitra dia misy hotely avy amin'ny rojo vy toy ny Sheraton ary Kempinksi.
Ny mpitondra tenin'ny Biraon'ny fizahantany nasionalin'i Djibouti dia nilaza hoe: “Faly be izahay fa fampirantiana voalohany amin'ny WTM London 2018 satria io no hetsika manerantany ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany. Fotoana tsara ho antsika io. ”
Nasongadin'ilay mpitondra teniny fa nanao ahoana ny navoakan'ny mpanonta fizahan-tany Lonely Planet ny laharana fahefatra an'i Djibouti teo amin'ny laharana faha-2018 voalohany hitsidihany tamin'ny taona XNUMX, noho ny velaran-tany mampitolagaga sy ny fifangaroan'ny asa an-tanety sy rano.
"Djibouti no nisy hatrizay, toeram-pivarotana fifandonana kolontsaina sy empira isan-karazany," hoy hatrany ny mpitondra teniny.
“Fifangaroana mahery vaika amin'ny fitaomana afrikana, arabo ary frantsay no manome ny tanàna Djibouti tontolo iainana hafahafa sy haitao.
"Djibouti dia mety ho kely amin'ny lafiny habe amin'ny firenena fa lehibe daholo ny momba azy."
WTM London, Tale zokiolona, Simon Press, hoy izy: “Faly izahay mandray ny debutant iray hafa ao amin'ny WTM London amin'ity taona ity. Mahafinaritra fa ny governemanta Djibouti dia mijery ny fizahan-tany ho iray amin'ireo sehatra lehibe hampiroborobo ny harinkarenany.
“Hanampy an'i Djibouti amin'ny tanjona kendreny ny WTM ary hiantoka antoka fa mora ny tambajotra sy ny fifanarahana arak'asa mandritra ny hetsika. WTM London izao no mampiantrano Firenena 187 ary ny faritra ary hanamora ny £ 3 miliara amin'ny fifanarahana indostrialy
“Tonga any amin'ny WTM London ny hevitra ary vetivety dia hitanay i Djibouti ho anisan'ny fandaharanasan'ireo mpizahatany.
Biraon'ny fizahantany nasionalin'i Djibouti